2x06 Podcast: Chipgate, Burngate iyo inbadan | Wararka IPhone
Podcast 2 × 06: Chipgate, Burngate iyo inbadan
Waxaan ku soo laabaneynaa usbuuc kale adoo adeegsanaya podcast-keena iyo markan si aan ugala hadalno dhibaatooyinka la sheegayo ee iPhone 6s iyo 6s Plus cusub. Dhinac ka mid ah Chipgate ama dhibaatada ka jirta processor-ka ay soo saaraan shirkado kala duwan. Lahaanshaha mid ama jab kale miyuu run ahaantii saameyn ku leeyahay isticmaalaha? Ka dibna waxaa jira gubasho la sheegay inay ku jiraan faraha isticmaaleyaasha qaarkood oo ka yimid kuleylka iPhone-ka ee gacmahooda ku jira. Waxaan sidoo kale ka wada hadalnay qalabka cusub ee 'Mac', cusbooneysiinta WhatsApp-ka ee la yaabka leh iyo Jeelka cusub ee loo yaqaan 'iOS 9'.
Dhegeyso »2 × 06: Chipgate, Burngate iyo inbadan» oo ku saabsan Spreaker.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » Podcast 2 × 06: Chipgate, Burngate iyo inbadan
Tweaks si loogu ekeysiiyo 3D Touch ayaa soo socota
Cusboonaysiinta ugu weyn ee PreferenceLoader waxay ku dareysaa iswaafajinta macruufka 9